Fraiin Jaceyl:- Nolol aad ka maqan tahay Ma sawiran karo sida ay noqon karto | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada jaceyl Fraiin Jaceyl:- Nolol aad ka maqan tahay Ma sawiran karo sida ay noqon karto
Fraiin Jaceyl:- Nolol aad ka maqan tahay Ma sawiran karo sida ay noqon karto
Bulsha:- Noloshu waxa ay macaan leedahay marka ay haysato ruuxa ay ka calmatay dunidan; waana ruuxa kaliya oo ay naftu weheshato mar hadii aad iga maqantahayna magaran karayo xaalada aan kusuganahay illeen waxa aad tahay qeyb kamid ah noloshayda .
Ma malayn karayo in aan cid kale laqeybsan karo maxaa yeelay waxa aan ahay haaf /nus oo qalbigu adiga ayuu kujiraa ee fadlan marna ha i kala jarin, qalbigaygu shaqeyn malaha waxa kaliya ee uu degdeg ugu sii noolaan kara na waa adiga kaliya,waxa shaqo culus qabato maskaxdayda daraadaa ayayna u waalan.
Haddii aadan iga soo gaari ogaw in aan u dhiman karo caashaqaaga I haligay ee sida xun ii dhex galay cid aan adiga ahayna aanayn waxba ii qaban Karin.
Jaceylkaagu waa mid iga tan weyn mana umaleynayo in uu jiro ruux adiga oo kale ah ee wata jaceyl intaa tankiisu la eg yahay , waxa ayna maskaxdaydu ii fasirtaa ,wacdaraha.com, in aanayd weligay inta noloshayda ahi aanad ka go’eynin/ katirtirmaynin oo aad ku yeeshay boog aanayn daawadoo idil loo isticmaali Karin jaceylkaaga mooyaane.